"Uummati Sudaan jaarsummaa Itoophiyaa ni dinqisiifata" - Ambaasaddar Mohaammud Diriir - BBC News Afaan Oromoo
Humnoota siyaasaa Sudaan walitti fiduuf yaliin Ministira Mummee Abiy Ahimadiin taasifame milkaa'ee gareeleen lamaan deebi'anii marii eegaluuf jedhu jedhan ergamaan addaa Itoophiyaa ambaasaaddar Mohaammud Diriir.
"Turtii isaanii gababaa keessatti qamoolee siyaasa hunda hasoofsisaniiru jechuun ni danda'ama" jedhan.
Sudaan hatattamaaan adeemsa nagaa keessaa akka seentuuf, yeroon cee'uumsaa kun akka biyyoota tokko tokkotti ta'e gara wal-dhabdee hamaatti hin ceene gochuun karoora isa guddaa ture jedhu.
Waldhibdeen Sudaan jaarsummaa Itoophiyaatiin mareetti deebi'eera
Humnooti lamaan marii addaan citee ture itti fufuuf walii galaniiru kan jedhan ambaasaaddar Mohaammud, kan biraan humni jijjiiramaafi bilisummaa diddaa uummataa jalqabe akka dhaabuufi humni waraanaa immoo hidhamtoota siyaasa akka gadhiisuuf walii galaniiru jedhu.
Qaamooti lamaanu duula jibbaa waliirratti kaasuun haa dhaabatu walii galtee jedhurra gahaniiru jedhan. Kana booda kan jiru gara marii isa duraatti deebi'uudha jedhu.
Mootummaan Itoophiyaa akka biyya ollaa tokkootti, Sudaan miseensaa IGAD fi Gamtaa Afrikaati waan taateef yaada kanaani dhimmaa sudaan kan hordofaa jirru jedhu ambaasaaddar Mohammuud.
Qamooliin lameen marii jalqabuuf walii haa galaniyyuu malee, namooti sagalee mormii dhageessisuuf daandiitti bahan, mootummaan sivilii akka aangootti bahu, intarneetiin akka gadhiifamuu fi kkf gaafachaa jiru.
Warri siyaasa xiinxalan mootummaan waraanaa kuni aangoosaa dabarsee kennusaa ni shakku jedhu ambaasaaddarichi.
Namooti garaagaraa miidiyaa hawaasumma irratti yaadota garaagaraa hafarsuu danda'u, Uummatni Sudaan adeemsa amma jiru akka waan guddaatti ilaala, gahee Itoophiyaas ni dinqisifatu jedhu.
MM Itoophiyaa Abiy Ahimad jaarsummaa kana kan eegalan waraanni biyyattii namoota 100 ta'an ajjeesuu isaan wal qabatee gamtaan Afriikaa biyyattii miseensummaa irraa haquun isaan booda ture.
Gareen mormitootaa Sudaan guyyoota sadiif itti fufuun hojii, geejibaafi tajaajilli akka dhaabatu waamicha dhiyeesseen namoonni hedduun ajjeefamunsaanii ni yaadatama.
Haaluma kana tasgabbeessuf jechas MM Itoophiyaa Dr Abiy Ahimad gara Kaartumiitti imaluun galee lamaan waliin marii taasisee deebii'unsaa ni yaadatama. Egaan jaarsummaan ammaanta gaggeefamaa jiru kunis kan imala ministira Mummeetti kan itti fufeedha jedhameera.